Tale Naverina Amin’ny Asany Taloha Rehefa Avy Nifonja Noho ny Fanaovana Kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Tale Naverina Amin'ny Asany Taloha Rehefa Avy Nifonja Noho ny Fanaovana Kolikoly
Voadika ny 19 Mey 2017 16:45 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Português
Diodino Cambaza no filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Seranampiaramanidina tao Mozambika teo anelanelan'ny 2005 sy 2008. Sary: Gustavo Sugahara/Flickr, CC BY 2.0
Naneho hevitra tamin-kasosorana ry zareo Mozambikana tamin'ilay tranganà kolikoly nataonà mpiasam-panjakana iray izay, taorian'ny namitàny ny antsasaky ny saziny tany am-ponja, niverina tafiditra amin'ny asam-panjakana indray ao amin'ilay andrim-panjakana nisy azy taloha izay nanaovany kolikoly.
Nosamborina tamin'ny 2008 i Diodino Cambaza ary tamin'ny 2010 dia voaheloka hifonja 22 taona, niaraka taminà olona efatra hafa, noho ny nanodinkodinan-dry zareo volam-bahoaka nitentina 54 tapitrisa meticais (880.000 dolara) tao amin'ny Seranampiaramanidin'i Mozambika, izay izy no filohan'ny filankevi-pitantanana teo anelanelan'ny 2005 sy 2008.
Noho ny fitondrantena tsara nasehony tany am-ponja dia nafàhana i Cambaza tamin'ny 2016 ary avy hatrany dia nangataka ny famerenana azy ho ao anatin'ny orinasa, izay nambara tamin'ny fomba ofisialy 19 andro taty aoriana.
Araka ny fanambaràna iray avy amin'ny biraon'ny Fampanoavan'ny Repoblika, izay nandanjalanja ilay fangatahana, tsy misy na kely aza sàkana tsy tokony hamerenana an'i Cambaza hitàna ny toerana notazoniny taloha satria taorian'ny nisamborana azy dia tsy nanao fanenjehana ara-pitsipika anatiny ilay orinasa. Kanefa, marobe ireo olompirenena no tsy nahita izany ho zavatra tsara.
Tao anaty tafa nataony ho an'ny Deutsche Welle, ny Ivontoeram-Bahoaka ho an'ny Fahamendrehana (CIP) , andrimpanjakana iray ao an-toerana miasa hisian'ny mangarahara, dia nanameloka ilay fanapahankevitry ny orinasa hamerina ilay mpitantana:
[ny famerenana an'i Diodino Cambaza] dia toy ny felaka atao amin'ireo ezaka atao hanafoanana ny kolikoly, ny tsy fisian'ny mangarahara ary hatramin'ireo ezaka ataon'ny fitsaràna, hoy ny CIP. Ny zavatra voamarikay, dia izay tokony ho natao, tokony ho nanao fanenjehana ara-pitsipika an'ilay nanao hadisoana ilay orinasa. Saingy raha ny fahitànay azy dia toa ninia nangiana ilay orinasa, tsy nangataka fanaovana dingana fanenjehana ara-pitsipika mahefa mba hampiharana ireo asa tokony ho nilaina natao.
Egídio Vaz, olona iray tena mpitari-kevitra ao amin'ny tambajotra sosialy mozambikàna, dia mandà ihany koa ity fihetsika ity ary mihevitra ilay raharaha ho maharikoriko:
Raha olona nahavita azy i Cambaza, dia tokony ho olona fakàn-kevitra, rehefa avy voaheloka sy nanefa ny antsasaky ny saziny. Hividy resaka hatao ho an'ny mpanao gazety izy ary kabary fandrisihana, hihaona sy hanavao miaraka aminà endrika namboamboarina. Fa satria tsy alehany izy, dia nekeny ny horaisina indray ho ao anatin'ny orinasa efa nitondràny ny fanampiany tamin'ny fampitondrana faisana azy. Araka izany, mazava ny resaka: zavatra tena tian'i Cambaza ny mihinana. Mahatsiravina!
Bitone Viage, tanora mozambikana mianatra Siansa Politika ao Brezila, miteny fa tsy manana maoraly arahana mihitsy ireo mpitondra:
Cambaza Nomen'ny Fanjakana Valisoa Noho izy Nanafintohina
Tsy mino aho hoe ianao koa hahazo valisoa amin'ny fomba tahaka izao, olona ìray izay efa tena nanafintohina ny fanjakana. Tsy manana velively ny fitondrantena tokony hiverenana anaty rafi-panjakana i Cambaza, *efa nanana fotoana hafahafa nahafahana nanompo azy izy, saingy izao dia mbola miasa ho an'ny fanjakana. Toy ny vata vy fitahirizana (coffre-fort) tsy mety ritra no nampiasàn'i Cambaza ny fanjakana, ary na ny fanjakana aza dia efa ketraka tamin'io mpifehy io, izay efa nampanantsoina, notsaraina, ary farany voaheloka hanefa ny sazy ambony indrindra. Raha ny marina no lazaina, tsy haiko izay antony nanomezana valisoa ho an'io bandy io tahaka izao.
Naleon'i Francey Zeúte nampahatsiahy momba ilay filoha voalohany tao Mozambika, Samora Machel, hoe any am-ponja no toeran'ny mpangalatra :
Any am-ponja no toeran'ny mpangalatra
Ho tsarovan'ny Mozambikana mandrakizay i Samora Machel, tsy amin'ny naha-filoha voalohany azy tao Mozambika fotsiny, fa koa noho ireo kabariny lalina mivantambantana, manindrona ary voalanjalanja. Ny iray tamin'ireo lahateniny nalaza indrindra dia ilay izy nilaza nanao kabary tsy valiana hoe ” mahavita ny zavatra rehetra ny olona iray be faniriana, mivarotra ny firenena fotsiny noho ny fitiavam-boninahitra sy laza, noho ny tombontsoany manokana”. Nilaza ihany koa i Samora hoe “tsy haiko raha miova ny olona be faniriana, fa raha ny niainako dia manaporofo fa tsia, manova fomba fiady izy, fa tsy manafoana ny fikasàna. Amin'izay fotoana izay ny olona iray be fikasàna dia lasa mpanao heloka bevava”.
Tao amin'ny twitter, fandàvana ihany koa no fanehoankevira hita:
Voaheloka hifonja 22 taona i Cambaza, mbola misy 10 tavela. Ary ankehitriny, niverina mampiasa azy ilay orinasa izay nahodinkodiny ny volany.
Emildo Sambo, avy amin'ny gazety @Verdade, mino fa ahitàna tombony ny fanaovana heloka bevava ao Mozambika:
Mba marina, eto #Mozambika, ahazoana tombony ny maha-mpangalatra sy mpandroba avy ao amin'ny @Frelimo. #Diodino Cambaza,, voaheloka hanefa ny sazy ambony indrindra, miverina ao amin'ny seranampiaramanidina ao Mozambika